Aqriso 27 qodob oo lagu xasuusan doono Xasan Sheekh | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Aqriso 27 qodob oo lagu xasuusan doono Xasan Sheekh
Aqriso 27 qodob oo lagu xasuusan doono Xasan Sheekh
waxaa maanta xilka wareejanayo madaxweynaha waqtiga xukunkiisa dhamaaday ee Xasan Shiikh Maxamuud, haddaba waxaan warbixintaan idinkugu soo gudbineynaa waxyaaba lagu xasuusan doono Xasan Shiikh Maxamuud.
Warbjxintaan waxaan kusoo koobnay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga diiwaangeliyey Xasan intii uu talada hayey waxayna isugu jiri doonaan waxyaabo fiican oo uu qabtay iyo waxyaabo Negative ah oo dowladdiisa sameysay ,
Haddaba hoos ka aqrio qaar kamid ah wixii laga diiwaangeliyey maadaama aan lawada qori karin wixii dhacay afartii sano ee uu maamulka hayey, adigana qeybta fikradaha noogu reeb waxaad ku xasuusan doonto madaxweynihii hore.
1) Xasan Shiikh Maxamuud wuxuu ahaa madweynihii ugu horeeyey ee dalka gudihiisa lagu doorto kadib burburkii ku dhacay Soomaaliya.
2) wuxuu nasiib u yeeshay inuu noqdo shaqsigii ugu horeeyey ee madaxweyne noqdo markii dowladda Soomaaliya laga saaray Kumeel gaarnimada.
3) Dhaqaalaha dalka iyo dadka hoos ayuu u dhacay intii uu talada hayey waxaana arrintaas si isku mid ah u dareemay dadka heerarkooda kala duwan dabaqadda Sarre, midda dhexe iyo midda hoosaba.
4) Magaalada Muqdisho oo laga dhisay dhismooyin badan intii uu madaxweynaha ahaa taasoo ay sabab u aheyd rajada Soomaaliya soo gashay.
5) Xilligii uu dalka hayey waxay noqotay waqtigii ugu qaalisanaa jagada Xildhibaanimo, maadaama xildhibaanada cusub ee lasoo doortay ay inta badan kusoo baxeyn lacag iyo musuq-maasuq
6) in la mideeyey inta badan manaahijta waxbarashada lana qaaday imtixaan isku mid ah waana tallaabo lagu amaani karo Dowladii Xasan Shiikh.
7) ma jirin isla xisaabtan buuran oo ka dhex jiray madaxda kala duwan ee dowladda oo ay ku jiraan madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha.
8) Qaraxyadii ugu waaweynaa oo muqdisho ka dhacay , sidoo kalana waxaa la dilay xildhibaano badan.
9) Inta badan waddooyinka Muqdisho oo amaankeeda lagu aaminay dhagxaan iyo Carro.
10) Dowladdii ugu horeysay ee xiriir fiican iyo taageero weyn ka heshay beesha caalamka iyadoo ay soomaaliya wadamo badan ku yeelatay safaarado shaqeenayo.
11) Dowladii Xasan ayaa noqotay middii ka shaqeysay sameynta maamul Goboleedyada dalka ka jiro.
12) Dowladii hore waxay Al-Shabaab ka saartay Gobolo badan oo ay ka tallin jirtay.
13) Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud oo Saxiixay Sharciga Dhowrista Xuquuqda Caruurta.
14) markii ugu horrerysay oo uu muqdisho ka dhaco Kulan ay yeelanayeen urur Goboleedka IGAD burburkii kadib.
15) waxay noqotay dowladdii ugu badneyd oo waraaqo aqoonsi ah ka guddoonto dowlado badan oo Soomaaliya Safiiro usoo magacaabay oo lagu qiyaasay ilaa 40 dowladood .
16) Dowladii Xasan Shiikh Maxamuud ayaa furtay 10 dugsi oo lagu tababaro ciidamada qaranka Soomaaliyeed.
17) Inta badan jidadka Muqdisho ayaa la saaray laami intii ay jirtay dowladii Xasan Shiikh Maxamuud.
18) Waxa ay dowladdii Xasan diyaarisay miisaaniyaddii ugu horreysay oo ay dawlad Soomaaliyeed dejisay tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1991kii.
19) Xiriir fiican oo ay dowladdii xasan la yeelatay Dalka Turkey markaas oo lagu wareejiyey meel badan oo dhaqaale dalka kasoo galo sida Garoonka diyaaradaha, Dekadda Muqdisho iyo isbitaalkii Digfeer
20) Ballaca Magaalada muqdisho oo kordhay intay jirtay dowladii Xasan wuxuu ahaa 5 km, dherekeeduna wuxuu ahaa 10km. Maanta ballaca Caasimadda waa 15km, halka dhererkuna uu yahay 25km sida lagu xaqiijiyay daraasad rasmi ah oo laga soo saaray NewYork, USA.
21) Waxaa magaalada si weyn looga hirgeliyey kaalmo shidaal oo badan intii ay jirtay dowladii Xasan, waxaana hadda lagu qiyaasi karaa ilaa 60 Kaalin.
22) Baarlaamkii Dowladdii xasan ayaa ansixiyey sharciyo badan oo ay dowladda ku howlgaleysay waxayna gaarayaan ilaa 20 sharci oo la ansixiyey.
23) ku guuleysiga dacwaddii badda Soomaaliya oo ay rabtay inay Kenya si boob ah ku qaadato, waana qodobka ugu weyn ee lagu amaani karo Xasan Shiikh Maxamuud.
24) Madaxweynihii ugu horeeyey oo soomaali ah oo gaaray ama booqday deegaanada ismaamul Goboleedka soomaaliyeed ee Itoobiya.
25) madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa lagu xasuusan doonaa inuu Xilka u wareejiyey si nabadgalyo ah maadaama looga guuleystay doorashadii dalka ka dhacday.
26) Xasan waxaa lagu xasuusan doonaa Illintii ka timaday markii uu la kulmay ilmo yar yar oo Agoon ah kuwaas oo qaadayey hees ay ku muujinayeen inay tabeyn aabayaashooda dhintay.
27) Dhulkii ay laheyd dowladda oo la siiyey dad shaqsiyaad ah, qaarna lagu iibsaday lacag waana dhibaato weyn oo ay ku kacday dowladii Xasan Shiikh Maxamuud.
Waxaa intaas ku eg qodobadii yaraa ee aan kasoo qaadanay waxa lagu xasuusan doono Xasan Shiikh Maxamuud, adigana hoos noogu soo qor qodobada aan ka tagnay maadaama aysan macquul aheyn inaan soo qorno 4 sano wixii lasoo qabtay ama hala haleeyey.
W/D: Cabaas Cali Xasan (Xaliye)
Previous articleSawirro Naxdin Leh: Hoobiyeyaashii Ku dhacay Muqdisho oo Qoys ku le’deen
Next articleMUUQAAL + SAWIRRO: Daawo Sidii Quruxda badneyd ee xilka loogu wareejiyey Madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Sheekh oo…